vanilla forum version 2.2 ကို updated ပြုလုပ်လိုက်ခြင်း — MYSTERY ZILLION
vanilla forum version 2.2 ကို updated ပြုလုပ်လိုက်ခြင်း
November 2013 edited November 2013 in About Forum
Vanilla forum version 2.2 ကို update လုပ်လိုက်တာ ကြောင့် ယခင် theme အဟောင်းနဲ့ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် vanilla forum မှာ ပါတဲ့ default theme ကို ပြန်လည် အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် vote , QnA system စတာတွေဟာ theme နဲ့ မကိုက်ညီနဲ့တော့တဲ့ အတွက် ပြန်လည် ဖြုတ်ထားပါတယ်။
လက်ရှိ forum ကို သီးသန့် forum အနေနဲ့သာ ထားရှိနိုင်ပြီး ယခင် အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာ များရှိပါက ဒီ thread အောက်မှာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
We need to change the theme. Light grey text on white background are not possible to read.
yes, I can't read either Need to update theme
အရောင်ကတော့ အတော်လေး အဆင်ပြေသွားပြီ ဒါပေမယ့် တချို့နေရာတွေက CSS တွေက မရသေးဘူး အားလုံးကို font-family ကို force လုပ်ရမယ်ထင်တယ်။
font family ကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် force လုပ်ထားတယ်။ ဘယ်နေရာတွေမှာ လိုနေသေးလဲ မသိဘူး။
<a href='http://postimg.org/image/campzg0nd/' target='_blank'><img src='http://s12.postimg.org/campzg0nd/mainpage.jpg' border='0' alt="mainpage" /></a>
<a href='http://postimg.org/image/5sr00i427/' target='_blank'><img src='http://s11.postimg.org/5sr00i427/message.jpg' border='0' alt="message" /></a>
CSS မှာ header တွေကို မထည့်ထားလိုက်မိဘူး။ အခု h1 ကနေ h6 အဓိ ပြန်ဖြည့်ထားလိုက်တယ်။
Message Box တွေမှာ OK Button ပျောက်နေတယ် Cancel ပဲနှိပ်ဆိုတဲ့သဘော
ပြင်လက်စနဲ့ တခါထဲဒါပါ ပြင်လိုက်ပါတော့ မဟုတ်ရင် စိတ်နဲ့ပြောင်းပြောင်း ဖတ်နေရတာ ကြာတော့မူးတယ်
<a href='http://postimg.org/image/e63pqvaf1/' target='_blank'><img src='http://s22.postimg.org/e63pqvaf1/adminpanel.jpg' border='0' alt="adminpanel" /></a>
MZ က Member တွေအတွက် Free ဖြစ်သလို Member တွေရဲ့ Discussion တွေကဖြစ်လာတဲ့ Contents တွေ အပေါ်ကနေလည်း အကျိုးအမြတ်ယူသလို ဖြစ်အောင်လည်း မလုပ်ပါဘူး အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကြော်ငြာဆိုတာကတော့ ထည့်ချင်ပါတယ် လာပြောတောင် လက်ခံဖို့မရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိကုန်ကျစရိတ်က စေတန်သူ့ဟာသူပေးနေတာ သူအခက်အခဲရှိလာရင်လည်း ကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ရင်လည်း တာဝန်ယူမယ့်လူ တယောက်ယောက်ရှိမှာပါ။
@lynlyndrupal ၁ လမှ US$10 ပဲ ကုန်တာပါ။ လစဉ် ပေးတာ ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ပေးတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ဘာမှ ပြောပြလောက်တဲ့ ပမာဏ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြော်ငြာထည့်ဖို့တော့ မစဉ်းစားသလို လက်ခံဖို့လည်း အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။
အစ်ကို comment မှာ zawgyi ကိုဘာလို့ရိုက်ခွင့်မပေးတာလဲဟင်
@lynlyndrupal , ကျွန်တော် ရှင်းပြထားဖူးပါတယ်။ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
အရင် 'Yunghkio' မြင်နေကြ အခု 'MON3 Anonta 1' ဖြစ်သွားတော့ တစ်မျိုးဖြစ်နေတာတော့ အမှန်ပဲ။ အရင်လို ဖိုရမ်ပြန်ဖြစ်သွားတာကို အားရသဗျ။
အကိုတို့ forum မှာ comment အသစ်ဝင်ရင်
tab မှာ notify လုပ်ရင်ကောင်းမယ်။
ဥပမာ ။ facebook message လိုပေါ့
@lynlyndrupal မှာ notification လေး ပေါ်တယ် မဟုတ်ဘူးလား ?
ပေါ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က တစ်ခြား tab
အစ်ကိုတို့ tab ထဲဝင်ပြီး reload လုပ်ကြည့်ရပါတယ်။
internet connection ကြောင့်လား?
Forum မှာ vb.Net ပိုင်းနဲ.မေးရင် သိပ်မဖြေသလိုပဲနော်.... ဘာလိုလဲမသိဘူး @-)
Glad to see new interface.
Hello my dear old brothers .......
I also have difficulties like " ညမီးအိမ် " with Unicode since MZ decided to use unicode. I tried .. and tried .. and try. Eventually, I disappear long time from Forum & appear again short time then disappear again.
Anyhow, there is still an attachment between Me & MZ bros & sis's . I came occasionally.
And I will try to be here just like the times after Nargis that we enjoyed heartfelt .
@KyiKyiNaing လက်ရှိက Software Development နဲ့ပါတ်သက်ပြီး နားလည်ပြီးတော့ ဖြေတဲ့လူတွေထဲက အမြဲတမ်းပုံမှန်က စေတန်နဲ့ ကျွန်တော် ၂ ယောက်ပဲရှိတယ် တခြားလူတွေက ပုံသေမရှိဘူး။ ပြဿနာက ၂ ယောက်လုံးက Windows မသုံးတော့ Windows Computer မရှိကြဘူး အဲဒါတွေမရှိတော့ Microsoft Product တွေရဲ့ ပြဿနာတွေက ဘယ်လိုမှ စမ်းကြည့်ပေးလို့မရပါဘူး အဲဒီတော့ အဲဒါတွေမေးရင်တော့ ဖြေမယ့်လူမရှိတော့ ကြာတဲ့အခါလည်း ကြာပါလိမ့်မယ်။ VB မေးလို့ မဖြေတောတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အဲဒီတော့ စမ်းကြည့်လို့လည်းမရတော့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအရ ဘယ်စာဖတ်ရင်တော့ ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ သိတဲ့အတွက် ဖတ်စရာပဲ ရှာပေးလို့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်က တက်နေတဲ့ Error ကိုရှင်းပေးတဲ့ အလေ့အကျင့်မရှိပါဘူး ကိုယ်တိုင်ပဲ ရှင်းတတ်စေချင်တဲ့အတွက် စာဖတ်ပြီးပဲ ကိုယ်တိုင်ရှင်းခိုင်းတဲ့ အဖြေမျိုးပဲဖြေပါတယ်။
@lynlyndrupal Refresh တော့လုပ်ရပါလိမ့်မယ် Facebook လိုတော့ Notification အလိုလိုမပေါ်ပါဘူး Email အမြဲဖွင့်ထားရင်တော့ Email Notification ကနေ Reply ကိုသိနိုင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် ကျွန်တော်က အစ်ကိုတို့
site suggest ပေးတာပါ။
အဲဒီလို ရတော့ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ပါ။
@lynlyndrupal , လက်ရှိ notification က ၂ မိနစ် တစ်ခါ အလိုလို refresh ချပေးပါတယ်။ real time တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
@KyiKyiNaing , ကို @CalmHill ပြောသလိုပါပဲ။ တကယ်လို့ PHP , Node.js , iOS , Android development လိုမျိုး မေးရင်တော့ ကျွန်တော် လိုအပ်တာတွေကို ချက်ခြင်းဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ .NET နဲ့က အလှမ်းဝေးပြီး windows မရှိတဲ့အတွက် စမ်းလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကူစဉ်းစားပေးပြီး ဖတ်ဖို့အတွက် link တွေပဲ ကျွန်တော် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
@Alexander , welcome back bro
မသိလို့ လားမကြည့်မိတာလားပဲ....forum ကပွဲ တွေလုပ်ရင် noti တက်လာလားးးးမသိလို..အခုမှစဝင်တာမို့လို... ...နောက်ြပီး မနက်ပိုင်းညနေပိုင်းမေးတာတွေကချက်ချင်းဖြေတာတွေရတယ်..နေခင်းပိုင်းမေး၇င်ချက်ချင်းမဖြေတာများတယ်နော်.....အိပ်ချိန်နဲများတိုးသွားတားလားမသိ
@KyiKyiNaing လက်ရှိ forum မှာ ဖြေနေတဲ့ သူတော်တော်များများက အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်ပိုင်း မှာ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ အားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထမင်းစားပြီးနောက်ပိုင်း နေ့လည်ပိုင်း အားတဲ့ အချိန် ဝင်ကြည့်တဲ့ အခါမှ ချက်ခြင်းဖြေလို့ ရတာကို ဖြေပေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ရှာကြည့် ။ဖတ်ကြည့်ရ အုံးမယ်ဆိုရင် နောက်နေ့ မှ ပြန်ဖြေဖြစ်တာ များပါတယ်။